Abakwa-South Carolina Abamkelwayo: Izikolo ze-SAT, I-Acceptance Rate
IYunivesithi yaseSouth Carolina Abavakalisi
Izikolo ze-SAT, i-Acceptance Rate, i-Financial Aid, kunye nokunye
Ngesilinganiso sokwamkelwa kweepesenti ezingama-68, iYunivesithi yeSouth Carolina ayiyona eyunivesithi ekhethileyo. Sekunjalo, uninzi lwabafundi abavunyelweneyo banomgangatho ophezulu webanga le-3.0 ("B") kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni angaphezulu kwesilinganiso. Amabanga kunye namanqaku okuvavanya adlala indima enkulu kwinkqubo yokungena. Abafake izicelo kwi-Yunivesithi ye-Honours Programme baya kufuneka bathumele iileta zengcebiso ngaphezu kwenkqubo yesicelo.
Bala amanani akho wokungena ngeCapepex ithuluzi lokukhulula.
I-USC - I-Acceptance Rate yase-Columbia: 68%
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT umdwebo we-USC
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 560/650
ISAT Math: 560/650
UMTHETHO WOMTHETHO: 25/30
IYunivesithi yaseMzantsi Carolina Inkcazo:
IYunivesithi yeSouth Carolina, ekhompyutheni yaseburhulumenteni yaseColombia, i-campus i-flagus yenkqubo yeyunivesithi yeSouth Carolina. Ngama-bachelor angama-350, iiprogram zeenkosi kunye nogqirha, iNyuvesi yaseMzantsi Carolina inika ithuba lokufunda ngokubanzi abafundi. Iyunivesithi inesiqendu seP Phi Beta Kappa , kwaye ibuyele kwikolishi ephakamileyo yeekharityhulam eziphakamileyo. I-USC ikwaziwa ngokubanzi ngomsebenzi wayo woovulindlela kunye nabafundi bekholeji yokuqala. Kwiimidlalo, i-USC Gamecocks incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Southeast-Conference Conference .
Ubhaliso lwabonke: 34,099 (25,556 abagqwesileyo)
Ukuphazamiseka kwesini: 47% Amadoda / 53% Abasetyhini
Imfundo kunye neMali: i-$ 11,454 (kwi-state); $ 30,882 (ngaphandle kwemeko)
Iincwadi: $ 1,023 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 9,700
Ezinye iindleko: $ 4,111
Iindleko ezipheleleyo: $ 26,288 (kwi-state); $ 45,716 (ngaphandle kwimeko)
IYunivesithi yeSouth Carolina I-Financial Aid (2015 - 16)
Izibonelelo: $ 6,127
Imali: $ 8,048
I-Popular Majors: I- Accounting, i-Biology, uLawulo lwezoShishino, uLwazi loLwaphulo-mthetho, iMfundo yabantwana abaselula, isiNgesi, i-Psychology, i-Psychology, iMali, iMbali, uLondolozo lweeNdwendwe, i-Kinesiology, ukuThengisa, ukuLondolozwa, iNzululwazi yezobupolitika, i-Psychology Lawulo
Ukugqiba iziqu, ukugcinwa kunye nokuThuthwa kweeRhafu
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 88%
Ukukhutshwa kwezinga: 13%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-4: 54%
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka eyi-6: i-73%
Imidlalo Yabantu: Ibhola, Umkhondo, kunye nebala, iBhola, iCoka, iNtambo, iThenati, iBhola yeBhola
Imidlalo yabasetyhini: Umkhondo kunye nomhlaba, Ukubhukuda, iChola, iSoftball, iVolleyball, iTennis, iBhola yebhola
IYunivesithi yeSouth Carolina yeSitatimende Somsebenzi
Isitatimende esipheleleyo se-mission singatholakala kwiwebhusayithi yaseYunivesithi yaseMzantsi Carolina yaseburhulumenteni
" Injongo ephambili yeYunivesithi yaseMzantsi Carolina i-Columbia yimfundo yabemi baseburhulumenteni ngokufundisa, uphando, imisebenzi yokudala, kunye nokubandakanya uluntu."
Abamkelwa kwiKholeji yaseBluefield State
Idilesi yeYunivesithi yaseFisk
Ikholeji yaseHodod e-Maryland Admissions
Iikholeji eziphezulu zeVermont
Ukunikezelwa kweekholegi zeeKholeji
I-Anna Maria College Admissions
I-Admissions yeYunivesithi yaseFranklin Pierce
I-BedSlide 1000 Pro Pro Review
Iinkcukacha Eziyisiseko Ngeendawo Zase-US
Uqeqesho loQeqesho lweZakhiwo - UkuQala ukuQeqesha iCarbohydrate UkuQeda ukuQeqesha
Adams State University Admissions
Iintetho ezintsha - Ukulungiswa kweLwimi ukuhlangabezana neemfuno ezintsha
Iifom zeeJometri zeeJebhu zeBafundi kwiBanga lesi-1
Funda ukudibanisa kwe-Verb Estar
I-Dorothy Hamill ye-Famous Wedge Haircut Photo Gallery
Ukujongana noMthetho wokuThengisa iBhanki 21
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseFort McHenry
Ukucwangcisa uMngcwabo wamaKristu okanye iSikhumbuzo
Isingeniso samazwi angasebenzi
Indlela yokusika i-Stencil
25 Amanqaku NgoBilly Flynn 'Ngeentsuku Zethu Zokuphila'
Amagumbi kunye nabakhi: Ziziphi iibhasi ezithengayo?
Iimodeli ezilula zeFood Mustang yakho
I-Virginia Tech GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
Mlawuli uChrist Christopher Wren, uMyili waseLondon Emva koMlilo